Zohy anaty rano eto amin'izao tontolo izao | Vaovao momba ny dia
Amin'ity indray mitoraka ity dia hihaona amin'ny tsara indrindra isika zohy anaty rano. Andao atomboka ny fitsidihana Montego Bay, Jamaika, toerana nisy anay Ilay Widosmaker, toerana malaza amin'ny fisitrihana scuba, dia ny fijanonany 80 metatra ambanin'ny rano. Tsara ny manamarika fa ao anaty lava-bato isika dia afaka mahita haran-dranomasina, spaonjy ary hazandrano maro loko.
Fotoana izao handehanana any Frantsa, izay hihaonantsika amin'ny Grotto Cosquer, heverina ho iray amin'ireo lava-bato ambanin'ny rano mahaliana indrindra eto an-tany ary ao no ahitanao sary hosodoko talohan'ny vanim-potoana nanomboka tamin'ny vanim-potoana Paleolithic. Ny lava-bato dia mipetraka 37 metatra ambanin'ny Ranomasina Mediterane. Raha sahy mitsidika ny lava-bato ianao dia tokony handeha manokana any Calanque de la Triperie, atsinanan'i Marseille.
La Zohy harena Izy io dia lava-bato ao anaty rano any amin'ny tanànan'i Rincón de la Victoria, 15 kilometatra miala ny tanànan'ny Malaga, any Espana. Tsara ny manamarika fa ilay lava-bato dia nohadina tao amin'ny vatolampy vatosokay, ary mamorona hantsana amoron'ny Ranomasina Mediterane.
La Zohy Esa'ala Izy io dia lava-bato any ambanin'ny tany, saika virjiny, any Papua New Guinea, indrindra ao amin'ny distrikan'i Esa'ala. Ho liana ianao hahafantatra fa nanjary nalaza izy tamin'ny fisehoany tamin'ny sarimihetsika Sanctum.
La Zohy anaty rano any Ordynskaya Izy io dia lava-bato any Russia, akaikin'ny faritra Perm, heverina ho iray amin'ireo lava-bato lehibe indrindra any Russia sy Europe.
Fampahalalana bebe kokoa: Ordinskaya sy ireo lava-bato ao anaty rano
Sary: Egypty taloha
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Zohy ambanin'ny rano eto amin'izao tontolo izao
Proizd, paradisa kely any Kroasia